Mon, Aug 03, 2020 | 23:15:42 NST
भत्केको घर पन्छाउने पैसा त छैन, नयाँ कसरी बन्छ ?
गएको वर्ष वैशाख १२ गते भूकम्प गएको एकवर्ष भएको छ । यो एकवर्षको समय भूकम्प पीडितका लागि कष्टकर त बन्यो नै बासको ठेगान पनि भएन । भूकम्पले घर भत्किएर विस्थापित भएका पीडित अझै आफ्नो थातथलो फर्क पाएका छैनन् ।
मन्त्रीलाई कुर्सी अभाव भएपछि..
काठमाडौं, वैशाख १२ – अतिथि धेरै भएपछि प्रधानमन्त्री सहभागी एक कार्यक्रममा कुर्सीको अभाव भएको छ । भूकम्प गएको वर्षदिनको अवसरमा काठमाडौंको धरहरामा श्रद्धाञ्जली दिने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सुरक्षा निकाय प्रमुख, सबैजसो कुटनीतिक निकायका प्रमुखलाई बोलाइएको थियो ।
भूकम्पमा परि मृत्यु भएकोको सम्झनामा सुन्धारामा स्मृतिसभा
काठमाडौं, वैशाख १२ – भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएकाको सम्झना तथा श्रद्धाञ्जलीका लागि काठमाडौंको सुन्धारामा आइतबार बिहान स्मृतिसभा भएको छ ।
भूकम्प गएको एक वर्ष पूरा
काठमाडौं, वैशाख १२ – भूकम्प गएको आइतबार एक वर्ष पूरा भएको छ । पोहोर वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ७ दशमलव ८ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी झण्डै ९ हजार जनाको ज्यान गयो । हजारौं घाइते भए ।
भूकम्पमा परिवारका चार सदस्य गुमाएकाको बिचल्ली
गोकर्णप्रसाद भण्डारी/रासस । दोलखा (जफे), वैशाख १२ – दोलखाको दक्षिणी गाउँ जफे–४ का महत परिवारमा भूकम्प गएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि बिचल्लीमा नै छ ।
गोरखा भूकम्पको १ वर्ष पूरा, रोकिएन परकम्प
काठमाडौं, वैशाख १२ - आजभन्दा ठिक एक वर्षअघि २०७२ साल वैशाख १२ गते । बिहानैदेखि मौसम धुमिलिएको । गर्मी मौसम भए पनि नीलो आकाश मडारिएर सूर्यको प्रकाश प्रस्ट देखिएको थिएन । शनिबारको दिन, नेपालीहरु आआफ्नै ध्याउन्नमा थिए ।
पुनर्निर्माण हुने दिन पर्खंदै रामेछापका भूकम्प पीडित
दीपक भट्ट/उज्यालो । रामेछाप, वैशाख ११ – भूकम्प गएको एक वर्ष बित्दापनि रामेछापमा पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको छैन । गएको वर्ष वैशाखमा गएको भूकम्पका कारण रामेछापमा ४२ जनाले ज्यान गुमाए । १ सय ३६ जना घाइते भएका थिए ।
सरकारले घर पनि भत्काउँदैन, मेसिन पनि किन्दैन
पी.टी.लोप्चन/उज्यालो । काठमाडौं, वैशाख ११ – भूकम्प गएको झण्डै डेढ महिनापछि (जेठ २४ गते आइतबार) काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन भौतिक विकास तथा निर्माण विभाग प्रमुख डा. उत्तर रेग्मीले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभएको थियो ‘अग्लो घर भत्काउन हामीले कंक्रिट कटर मगाएका छौं, त्यसको तौल झण्डै साढे पाँच टन हुन्छ । त्यो उपकरणलाई क्रेनले लिफ्ट गरेर माथि लगेपछि जत्तिसुकै अग्लो घरपनि रिमोट कन्ट्रोलबाटै काट्न सक्छौं ।’ त्यत्तिबेला भूकम्पले क्षतिग्रस्त घर भत्काउन महानगरपालिकामा निवेदन दिने र अ...
यस्तो छ अहिले बुंगमती
रोजगारी त्यही अनुसारको थियो । त्यो बेला सम्झँदै स्थानीय धनदेवी तुलाधरले सुनाउनुभयो ‘पर्यटकलाई आकर्षण गर्न विभिन्न थरिका व्यवसाय चल्थ्यो । आम्दानी समेत हुन्थ्यो । अब सब थोक खत्तम भयो ।’
टेलिकमले भोलि टुँडिखेलमा साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्ने
काठमाडौं, वैशाख ११ – नेपाल टेलिकमले भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएको सम्झना तथा शान्तिको कामना गर्दै दीप प्रज्वलन तथा मधुर साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।
​पछिल्लो १६ घन्टामा दोश्रो परकम्प
काठमाडौं, वैशाख १० - सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु भएर ४ म्याग्निच्युटको परकम्प गएको छ । दिउँसो ४ बजेर ४० मिनेट जाँदा सिन्धुपाल्चोकमा केन्द्रबिन्दु भर ४ म्याग्निच्युटको परकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ ।
काठमाडौंदेखि बारपाकसम्मको साइकल र्‍याली सुरु
काठमाडौं, वैशाख १० - टुर द वारपाक माउन्ट हिल साइकल र्‍याली शुक्रबार सुरु भएको छ । कान्तिपथबाट सुरु भएको साइकल र्‍याली १२ गते पोहोर गएको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक पुग्नेछ ।
भूकम्प सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भक्तपुरमा
भक्तपुर, वैशाख १० – भूकम्प इन्जिनियरिङ्ग तथा विपदपछिको पुनर्निर्माण योजनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भक्तपुरमा हुने भएको छ ।
३ सय ५० वर्षपछि रुप फेर्दै रानीपोखरी
काठमाडौं, वैशाख १० – आगामी आइतबारदेखि काठमाडौं रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सुरु गरिने भएको छ । गएको वर्ष वैशाखमा गएको भूकम्पका कारण पोखरीको मध्यभागमा अवस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिरमा समेत पूर्णरुपमा क्षति भएको थियो ।
बालिकाले ‘लच्छिन’ लिएर गएपछि
‘दाजु बहिनी पसलमा आएर टिभी खोल्दिनुस् न अङ्कल टिभी हेर्छु भन्थे । म टिभी खोलिदिन्थें, धुप बाल्दा पनि अङ्कल किन आगो बाल्नुभएको भनेर सोध्थे । फुच्ची चाहिँ त दिनैभर जस्तै यही हुन्थिन्’ यत्ति कुरा भनेपछि केशव श्रेष्ठको बोली बीचैमा रोकियो ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने
काठमाडौं, वैशाख ९ – भूकम्प र नाकाबन्दीपछि तङ्ग्रिँदै गरेको मुुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न निकायबिच साझेदारीका साथ प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
९ जिल्लाका १० गाविसमा अनुदान वितरणको काम सुरु
काठमाडौं, वैशाख ८ – सरकारले अहिलेसम्म ९ जिल्लाको १० वटा गाविसमा भूकम्पपछिको आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरण प्रकृया अघि बढाएको छ ।
२१ जिल्लामा वन पैदावर आपूर्ति समिति बन्ने
काठमाडौं, वैशाख ८ – सरकारले भूकम्प प्रभावित १९ सहित २१ जिल्लामा वन पैदावर आपूर्ति समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका नगरपालिका, गाविसले आआफ्नो तहको परिषद्बाट निर्णय गराई नक्सा पासमा छुट दिने व्यवस्था गर्नका निर्देशन पनि गरेको छ ।
काठमाडौं, वैशाख ८ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले भूकम्प स्मृति दिवसमा यही वैशाख १२ र १३ गते विविध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वैशाख १२ गते पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न कार्यक्रम हुने
काठमाडौं, वैशाख ७ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तयारी परामर्श बैठकले वैशाख १२ गते मुलुकलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको सन्देश प्रवाह गर्नेगरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणले ल्यायो गैरसरकारी संस्था परिचालन कार्यविधि
काठमाडौँ, वैशाख ३ – पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि गैरसरकारी संस्था परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ जारी गरेको छ ।
प्राधिकरणले रोक्यो ओखलढुंगाका ५० सरकारी कार्यालयको निर्माण प्रक्रिया
शिव ढुंगाना/उज्यालो । आोखलढुंगा, वैशाख २ – राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गरेको ओखलढुंगाका ५० वटा सरकारी भवन निर्माणको प्रक्रिया रोकिएको छ ।
दोलखामा गएराति ४.४ रेक्टर स्केलको परकम्प
काठमाडौं, वैशाख १ – दोलखा केन्द्रविन्दु भएर मंगलबार राति ४ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको परकम्प गएको छ । राति ८ बजेर २६ मिनेटमा दोलखा केन्द्रविन्दु भएर ४ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको पराकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ ।
#२०७२ : सयौं झड्काले हल्लँदै गुज्रेको साल
पी.टी.लोप्चन/उज्यालो । काठमाडौं, चैत ३० – २०७२ सालको सुरुमै ७ दशमलव ८ रेक्टर स्केलको भूकम्पले झड्का दिएको नेपालीलाई वर्षैभरी हल्लाइरह्यो । वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पपछि अहिलेसम्ममा चार रेक्टर स्केलभन्दा माथिको परकम्पले ४ सय ४६ पटक हल्लाएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ ।
गोरखाको हंसपुरका भूकम्प पीडितले एक हप्ताभित्र अनुदानको पहिलो किस्ता पाउने
गोरखा, चैत २९ – गोरखाको हंसपुर गाविसका भूकम्प पीडितले एक हप्ताभित्र पुनर्निर्माण बापतको पहिलो किस्ताको अनुदान रकम पाउने भएका छन् । रकम वितरण अघिको प्रक्रिया पूरा भएकाले अब केन्द्रबाट बजेट आउना साथ वितरण थालिने भएको हो ।
थप सुविधा बिना पुनर्निर्माणको काम नगर्ने भन्दै गाविस सचिवले छाप बुझाए
शिव ढुंगाना/उज्यालो । ओखलढुंगा, चैत २८–ओखलढुंगामा आन्दोलनरत गाविस सचिवहरुले कानुनी, आर्थिक र भौतिक सुरक्षा विना पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम नगर्ने घोषणासहित स्थानीय विकास अधिकारीलाई कार्यालयको छाप बुझाएका छन् ।
परकम्पपछि भाग्दा ५ जना घाइते
काठमाडौं, चैत २७ - शनिबार बेलुकी ललितपुरको भैसीपाटी केन्द्रबिन्दु भएर गएको परकम्पमा परेर ५ जना घाइते भएका छन् । परकम्पपछि भाग्दा लडेर उनीहरु घाइते भएका महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक किसन सिंह थापाले जानकारी दिनुभयो ।
​परकम्पको केन्द्रबिन्दु ललितपुरको भैंसेपाटी
काठमाडौं, चैत २७ - शनिबार बेलुकी गएको परकम्पको केन्द्रबिन्दु ललितपुरको भैसीपाटीमा रहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । बेलुकी ७ बजेर ५ मिनेट जाँदा भैसीपाटी केन्द्रबिन्दु भएर ४ दशमलव ५ रेक्टर स्केलको परकम्प गएको हो ।
​काठमाडौंमा परकम्प, जनजीवन त्रस्त
काठमाडौं, चैत २७ - काठमाडौंमा भर्खरै परकम्प गएको छ । बेलुकी ७ बजेर ५ मिनेट जाँदा परकम्प गएको हो । परकम्प पछि मानिसहरु सडकमा निस्किएका छन् । जनजीवन त्रस्त । परकम्पको केन्द्रबिन्दु खुलेको छैन ।
भक्तपुरका १० सम्पदाको पुनर्निर्माण सुरु
रमेश गिरी/उज्यालो । भक्तपुर, चैत २७ – भूकम्पले क्षति पु¥याएका भक्तपुरका १० वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण एवम् जिर्णोद्धारको काम सुरु भएको छ ।
सिन्धुलीमा भूकम्प पीडितलाई अनुदान वितरण प्रकृया रोकियो
बाबुराम देवकोटा/उज्यालो । सिन्धुली, चैत २६ सिन्धुलीमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले झाँगाझोली रातमाटा गाविसबाटसुरु गरेको भूकम्पपछि आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरण प्रकृया रोकिएको छ ।
भूकम्प पीडित बालबालिका बेचिएर वेलायत पुग्ने गरेको दावी
काठमाडौं, चैत २२ – भूकम्पमा परेर बाँच्न सफल नेपालका बालबालिकालाई घरेलु कामदारको रुपमा बेलायती परिवारलाई बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । भूकम्पमा बााच्न सफल भएका १० वर्षभन्दा कम उमेरका नेपाली बालबालिका बेलायती परिवारलाई बेच्ने गरेको खबर बेलायती पत्रिका द सनले सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालमा अझै दैनिक ४० वटा भूकम्प
काठमाडौं, चैत २२ - गएको वैशाख १२ गतेको ७.८ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली गोरखा भूकम्पपछि निरन्तर परकम्प जाने क्रम जारी छ ।
भूकम्प पीडितलाई अनुदानको दुई लाख बाँड्ने प्रक्रिया सुरु
गोरखा, चैत २१ - भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अन्तर्गत गोरखामा २ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । जिल्लाको हंसपुर गाविसबाट अनुदान रकम वितरणको प्रक्रिया औपचारिक रुपमा सुरु भएको हो ।
बिस्केट जात्राका लागि भूकम्प पीडितको अस्थायी शिविर हटाइयो
भक्तपर, चैत २१ – यसवर्षको बिस्केट जात्राका लागि भूकम्प पीडितको अस्थायी शिविर हटाइएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाको ल्यासिंखेल स्थित बिस्केटको लिङ्गो उठाउने ठाउँमा बस्दै आएका भूकम्प पीडितलाई अन्यत्रै सारिएको हो ।